TOUR SAVA 2017: “Guichet fermé” foana ny fampisehoana nataon’i Black Nadia.
ACTUALITE/ Artistique/ Evenement
Lynda ANDRIATSITONTA tour sava	0 Commentaire juil 30, 2017
Nanamporofo fa mankafy ny hiran’i Black Nadia ny mponina any amin’ny faritra Avaratr’i Madagasikara. Saika voatetin’ny mpanakanto avokoa ireo toerana azo hanaovana fampisehoana any amin’ny Faritra SAVA toy an’i Belampona, Ambodiangezoka, Vohémar…
Nandritra ny fitetezam-paritra “Tour SAVA 2017”, feno dia feno ny fandaharam-potoanan’ity mpanakanto ity. Nanomboka ny 01 jolay ka hatramin’ny 01 Aogositra 2017 tsy tapaka olona ny toerana nanaovana fampisehoana na ny fampisehoana tamin’ny antoandro na ny “bal” natao isaky ny alina mandra-parain’ny andro. Nambaran’i Black Nadia fa “guichet fermé” foana ny hetsika Nanampy tapakila mihitsy aza ho fanomezana fahafaham-po ny mpankafy. Ohatra tamin’izany ny tao amin’ny PK 10 Sambava.
Ny gadon-kira miloko afrikanina na “Coupé decalé” ny ankamaroan’ny kanto navoakan’ny tarika. Tsy nijanona tamin’io ihany anefa fa ahitana gadona hafa ihany koa ny hirany.
Fandresena lehibe ho an’ny mpanakanto Tour SAVA 2017.
‹ MARATHON INTERNATIONAL DE TANA: 20% de la recette des inscriptions sera versé à l’AKAMASOA.	› ISPM : Un appui pour choisir sa filière.